Iimveliso ezi-3 ezinevumba loncwadi oya kuthi ube nalo | Uncwadi lwangoku
Kuthi sonke sithanda uncwadi, kusenokwenzeka ukuba sikuphephe ukuthenga iimveliso, nangona zingezizo iincwadi, zinxulumene kakhulu nazo. Sisithini? Ewe, ukusuka kokulula kwaye kungabizi ibhukumaka phezulu ingqokelela ekhethekileyo, zilinganiselwe kwaye zibiza kakhulu kwiincwadi esizithandayo, eziqhubekayo oomatshini bokuchwetheza abadala o iishelfu zoqobo ikhaya lethu.
Yimeko ye Iimveliso ezi-3 ezinevumba loncwadi ukuba ufuna ukusukela namhlanje siyacebisa kweli nqaku. Zonke ezi-3 azibizi, besele sikulumkisile, kodwa kufanelekile… Ngokukodwa ndiye ndonwabela ukukwazi "ukunuka" kwaye yindlela abayikhuthaza ngayo.
1 Isiqholo 'Bibliothèque'
2 Ikhandlela 'L'oeil du Poète'
3 Amakhandlela anevumba lencwadi okanye umbhali wakho omthandayo
Esi siqholo somtyikityo Byredo ayisiyixabiso kwaphela. Ixabiso layo leebhotile ezili-100 ml 160 euro malunga, kodwa ngokufaka nje amathontsi ambalwa, iyakukuhambisa kwisiseko seencwadi ezindala zethala leencwadi elidala ... Eyona nto imbi kakhulu ngezi ndaba ayisixabiso lazo kuphela kodwa ikwanikezelo olulinganiselweyo ukuze ngaphezulu ixesha, eli vumba liyayeka ukwenziwa.
Kulabo bangenakho ukuthenga esi siqholo, baxelele ukuba nabo banalo ivumba ifomathi yekhandlela kunye nexabiso elithengekayo: 55 euro.
Ikhandlela 'L'oeil du Poète'
Batsho ukuba uninzi lweembongi kunye nabanye ababhali bayazivumela ukuba bafikelelwe zii-muses kwiigadi kunye neepati. Eli khandlela lifanekisela oko: ivumba elitsha, elineentyatyambo, eliza kuthi likugcwalise ngokukhanya kuphela kodwa nangombono kunye nenyathelo ekufuneka ulibhalile ...
Ixabiso layo lokuqala li 48 euro kwaye utyikityo lwakho Idiptyque.
Amakhandlela anevumba lencwadi okanye umbhali wakho omthandayo
Kukho UJane Austen, de Edgar Allan Poe, de UCharles Dickens okanye UMark Twain phakathi kwabanye ... Zitshiphu kakhulu kunangaphambili, kuba zijikelezile IRandi ye21 Ngokurhabaxa, kodwa uza kuphunga ntoni uJane Austen ngokomzekelo? Ukufuna ukwazi kungakwenza! Andazi ngawe ... Basuka kwi- ivenkile IPadywax, ukuba ufuna ukugcina iso kubo.
Ucinga ntoni ngezi mveliso? Ngaba ungathenga nayiphi na?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iimveliso ezi-3 ezinevumba loncwadi oya kuthi ube nalo